စွမ်းဆောင်ရည်ကို ခုန်တက်သွားစေမယ့် Huawei ရဲ့ GPU Turbo နည်းပညာဆိုတာ?? – DigitalTimes
Honor ရဲ့ GPU Turbo နည်းပညာက ကုမ္ပဏီကထုတ်ခဲ့သမျှဟန်းဆက်တော်တော်များများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ရော ဘက်ထရီသက်တမ်းပါ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ အခုဒီနည်းပညာကို high-end စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Honor 10, ပြီးရင်တော့ Honor Play, View 10, Honor9Lite နဲ့ Honor 7X တို့မှာပါ သုံးလာပါတော့မယ်။
AI နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်ထားတဲ့ Dual-camera၊ ဖန်ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းနဲ့ စွမ်းရည်မြင့် Kirin 970 Processor တွေကိုတော့ Huawei P20 Pro မှာကတည်းက တွေ့ပြီးသားဖြစ်လို့ ဒီတစ်ခေါက် Honor 10 မှာ GPU Turbo နည်းပညာနဲ့ အမြင့်စား Chipset ကိုသာသုံးလိုက်ရင် အမြန်ဆုံးဆိုတဲ့စမတ်ဖုန်းတွေထဲက တစ်လုံးဖြစ်လာနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
Honor ရဲ့ GPU Turbo နည်းပညာဆိုတာကတော့ Graphic Hardware နဲ့ သူ့ကို Run နေရတဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကြားက ဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေ အတားအဆီးတွေကို ဖြေရှင်းပေးထားတဲ့နည်းပညာပါ။ နည်းပညာတွေဖန်တီးမှုအသေးစိတ်တွေကတော့ အကုန်ကောင်းပေမယ့် သုံးစွဲသူတွေအတွက်ရောတကယ်ပိုကောင်းလာသလား?? Honor ကတော့ GPU Turbo ကိုပြောင်းလိုက်ရင် စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု၊ အပူချိန် ဒါတွေအားလုံးမှာ ပိုပြီးကောင်းလာတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့ GPU Turbo က အရင် Graphic Framework တွေနဲ့ယှဉ်လိုက်ရင် စွမ်းဆောင်ရည်က ၆၀% တောင် ပိုမြင့်လာတဲ့အတွက် Performance ပိုမြင့် Frame rate တွေလည်း ပိုငြိမ်တဲ့အပြင် ပုံတွေရဲ့အရည်အသွေးတွေလည်း သေချာပေါက်ပိုကောင်းလာမှာပါ။ 3D ဂိမ်းတွေဆိုရင်တော့ ပိုလည်း Smooth ဖြစ်လာပြီး HDR(High Dynamic Range) မထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်တောင် ရုပ်ထွက်တွေက ပိုမိုက်နေမှာပါ။
နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကတော့ စွမ်းအင်ကုန်မှုက ၃၀% လောက်ကို လျော့သွားတာပါ။ ဆိုတော့ ဂိမ်းတွေမြန်မြန် run နိုင်တဲ့အပြင် ဘက်ထရီစားလည်း သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ စွမ်းအင်သုံးနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဖုန်းလည်း မပူတော့ဘဲ အပူလွန်တာကာကွယ်ဖို့ စွမ်းဆောင်ရည်လျှော့ချတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးလည်း ကင်းသွားပါတယ်။
ဒီလိုအားသာချက်တွေရှိလာတဲ့ GPU Turbo ကို ဘယ်ချိန်မှာရနိုင်တော့မလဲ??
Honor 10 ကတော့ ဒီနည်းပညာကိုသုံးမယ့် ပထမဆုံးစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးပါပဲ။ သူကတော့ သြဂုတ်လအစပိုင်းလောက်ထွက်လာမယ်လို့မှန်းရပြီး ဥရောပ၊ အာရှ၊ ရုရှား၊ အိန္ဒိယနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွေအပြင် တစ်ကမ္ဘာလုံးကသုံးစွဲသူတွေအားလုံး ဒီ Update နည်းပညာကိုမကြာခင်ရကြမှာဖြစ်ကြောင်းတော့ ပြောထားပါတယ်။
Honor9Lite, View 10 နဲ့ Honor 7X တို့ကတော့ Update ကို စက်တင်ဘာလလောက်မှာရနိုင်ချေရှိပြီး ကျန်တဲ့ဟန်းဆက်တွေကတော့ နိုဝင်ဘာလလောက်မှာ ရလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။
Honor ရဲ့ GPU Turbo နညျးပညာက ကုမ်ပဏီကထုတျခဲ့သမြှဟနျးဆကျတျောတျောမြားမြားအတှကျ စှမျးဆောငျရညျရော ဘကျထရီသကျတမျးပါ ပိုမိုကောငျးမှနျလာစဖေို့ရညျရှယျထားတာပါ။ အခုဒီနညျးပညာကို high-end စမတျဖုနျးတဈလုံးဖွဈတဲ့ Honor 10, ပွီးရငျတော့ Honor Play, View 10, Honor9Lite နဲ့ Honor 7X တို့မှာပါ သုံးလာပါတော့မယျ။
AI နဲ့အဆငျ့မွှငျ့တငျထားတဲ့ Dual-camera၊ ဖနျကိုယျထညျဒီဇိုငျးနဲ့ စှမျးရညျမွငျ့ Kirin 970 Processor တှကေိုတော့ Huawei P20 Pro မှာကတညျးက တှပွေီ့းသားဖွဈလို့ ဒီတဈခေါကျ Honor 10 မှာ GPU Turbo နညျးပညာနဲ့ အမွငျ့စား Chipset ကိုသာသုံးလိုကျရငျ အမွနျဆုံးဆိုတဲ့စမတျဖုနျးတှထေဲက တဈလုံးဖွဈလာနိုငျမယျထငျပါတယျ။
Honor ရဲ့ GPU Turbo နညျးပညာဆိုတာကတော့ Graphic Hardware နဲ့ သူ့ကို Run နရေတဲ့ဆော့ဖျဝဲလျကွားက ဖွဈတတျတဲ့ပွဿနာတှေ အတားအဆီးတှကေို ဖွရှေငျးပေးထားတဲ့နညျးပညာပါ။ နညျးပညာတှဖေနျတီးမှုအသေးစိတျတှကေတော့ အကုနျကောငျးပမေယျ့ သုံးစှဲသူတှအေတှကျရောတကယျပိုကောငျးလာသလား?? Honor ကတော့ GPU Turbo ကိုပွောငျးလိုကျရငျ စှမျးဆောငျရညျ၊ စှမျးအငျအသုံးပွုမှု၊ အပူခြိနျ ဒါတှအေားလုံးမှာ ပိုပွီးကောငျးလာတယျလို့ ဆိုထားပါတယျ။
သူ့ရဲ့ GPU Turbo က အရငျ Graphic Framework တှနေဲ့ယှဉျလိုကျရငျ စှမျးဆောငျရညျက ၆၀% တောငျ ပိုမွငျ့လာတဲ့အတှကျ Performance ပိုမွငျ့ Frame rate တှလေညျး ပိုငွိမျတဲ့အပွငျ ပုံတှရေဲ့အရညျအသှေးတှလေညျး သခြောပေါကျပိုကောငျးလာမှာပါ။ 3D ဂိမျးတှဆေိုရငျတော့ ပိုလညျး Smooth ဖွဈလာပွီး HDR(High Dynamic Range) မထောကျပံ့ပေးနိုငျရငျတောငျ ရုပျထှကျတှကေ ပိုမိုကျနမှောပါ။
နောကျထပျအားသာခကျြတဈခုကတော့ စှမျးအငျကုနျမှုက ၃၀% လောကျကို လြော့သှားတာပါ။ ဆိုတော့ ဂိမျးတှမွေနျမွနျ run နိုငျတဲ့အပွငျ ဘကျထရီစားလညျး သကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။ စှမျးအငျသုံးနညျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဖုနျးလညျး မပူတော့ဘဲ အပူလှနျတာကာကှယျဖို့ စှမျးဆောငျရညျလြှော့ခတြယျဆိုတဲ့ကိစ်စမြိုးလညျး ကငျးသှားပါတယျ။
ဒီလိုအားသာခကျြတှရှေိလာတဲ့ GPU Turbo ကို ဘယျခြိနျမှာရနိုငျတော့မလဲ??
Honor 10 ကတော့ ဒီနညျးပညာကိုသုံးမယျ့ ပထမဆုံးစမတျဖုနျးတဈလုံးပါပဲ။ သူကတော့ သွဂုတျလအစပိုငျးလောကျထှကျလာမယျလို့မှနျးရပွီး ဥရောပ၊ အာရှ၊ ရုရှား၊ အိန်ဒိယနဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေတှအေပွငျ တဈကမ်ဘာလုံးကသုံးစှဲသူတှအေားလုံး ဒီ Update နညျးပညာကိုမကွာခငျရကွမှာဖွဈကွောငျးတော့ ပွောထားပါတယျ။
Honor9Lite, View 10 နဲ့ Honor 7X တို့ကတော့ Update ကို စကျတငျဘာလလောကျမှာရနိုငျခရြှေိပွီး ကနျြတဲ့ဟနျးဆကျတှကေတော့ နိုဝငျဘာလလောကျမှာ ရလာမယျလို့ခနျ့မှနျးရပါတယျ။